Sahityabatika: यसपालीको तीज संस्कृति या विकृति
यसपालीको तीज संस्कृति या विकृति
नेपालगंजमा तिज अघि आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममो दृष्य
यसपटकको तीज भड्किलो भयो भनेर प्राय सबैजसो पत्रपत्रिका र अनलाइनमा पनि ठुलो चर्चाको विषय बन्यो । लेख्न पाएपछि को नै पछि प¥थ्यो र धित नमरुन्जेल लेखियो पनि । रातो सारी र छड्के तिलहरीको प्रदर्शन गर्ने उत्साहका रुपमा तीज बदलिएकोमा संस्कृतिप्रति गम्भिर धेरैजना चिन्तित पनि देखिए । नयाँ पुस्ताका महिलालाई तीजको धार्मिक या साँस्कृतिक पक्षसंगभन्दा तामझाम र ग्ल्यामरसँग मतलब छ भन्नेहरु पनि धेरै भेटिए । उहिलेउहिले चाडपर्वमा मिठोचोखो भान्सा गरिन्थ्यो । आजभोली चाडपर्व नआउदै महिनौ दिन अघिदेखि शुभकामना भेटघाट कार्यक्रम गरिन्छन् र पार्टी गरेर मनाउन सुरु गरिन्छ । हिन्दु महिलाहरुको महान पर्व तीज होेस् या जिसस क्राइस्टको सम्झना गर्ने क्रिसमस, दशैं होस् या तिहार यी सबै पर्वहरुमा हामी मिसमास भएर मदमांसले मातिन्छौं, झलिन्छौं र भद्दा संगितमा बेतालसंग हलिन्छौं । के यस्तै हो त नेपाली सभ्यता ?
हामी भन्छौं नयाँ पुस्ताले हाम्रा असली संस्कृति बिर्सदै गएकाछन् । यस्तै आरोप लाग्यो अहिलेका नयाँ पुस्ताका महिलाहरुलाई । तीज आउनु एक महिनापूर्व तीजको तडकभडक र रमझम सुरु हुन थालेपछि नयाँ पुस्ताले तीजको असली संस्कृति बुझ्न पाएकोछैन । तीजमा दिदीबहिनीहरु जम्मा भएर रमाइलो गर्ने परम्पराको पछिल्लो पुस्तालाई मतलब छैन । अनि हामी सजिलै भनिदिन्छौं आजभोलीका युवा बिग्रिए यो त पश्चिमी सभ्यता हो । के साँच्चै आजभोलीका युवाहरु बिग्रिएकै हुन् त ?
प्रश्नको उत्तर पर्खिन नसकेर आँखा चिम्म गर्दै हामीहरुले पनि अँध्यारो रहमा हामफाल्यौं । पश्चिमीहरुको आफ्नै सभ्यता होला त्यसमा म प्रश्नचिन्ह उठाउन चाहन्न । तर आज हाम्रो संस्कार विकारयुक्त र बेकार हुँदै गएको चाँही मलाई थाहा छ । शहरबजारमा बस्ने महिलाहरु फुर्सदमा हुने भएकाले समय कटाउन पनि यस्तो रमझममा सरिक हुने गरेको एकथरीको विश्लेषण छ । तीजको अवसर भन्दै शहरी क्षेत्रमा होटल तथा पार्टी प्यालेसमा भोज खाने नाचगान गर्ने र तजिे प्रतियोगिता आयोजन ा गर्ने चलन हावी हुँदैजान थालेको छ । वास्तवमा तीज भनेको जम्मा तीन दिन मनाउने हो । आजभोली त एकडेढ महिना तीज मनाउने चलन चलदैछ । अधिकारकर्मी , सञ्चारकर्मीले यस्तो तरिकाले तीज मनाउनु राम्रो होइन भनेर चिन्ता ब्यक्त गरे । हुनेखानेहरुले तीजलाई भड्किलो बनाउन थालेपछि यसको साँस्कृतिक पक्षलोप हुँदैछ । तर बिडम्वना यसपटक समाजमा उज्यालो चेतना बाँडेर समाजलाई सुसज्जित पार्ने पत्रकारहरुपनि तीज आउन हप्तौ दिन अघिदेखि तीजको दर खाने र शुभकामना आदानप्रदान गर्ने भन्दै होटल र पार्टी प्यालेसमा ब्यस्त देखिए । तीजका गीतहरु भड्किलो भयो भनि रिपोर्टिङ्ग गर्नेहरु नै सोही गितमा छमछमी नाचे । समुहगत रुपमा अलग अलग दिन पारेर शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गरियो । यसपटक बाँकेमा क्रियाशिल पत्रकारले ब्यक्तिगत, संस्थागत र समुहगत गरि आधा दर्जन बढि यस्ता कार्यक्रमहरु गरे अनि तीजको गीतमा मज्जाले छमछमी नाचे । एकजना पत्रकार मित्रले अचम्म मान्दै मलाई भन्नुभएको थियो उहाँको साथी त श्रीमतीसंगै दर खान माइती जानु भयो रे । चेलीको पर्वमा माइती गएर दर पुरुषले समेत दर खाएकोमा उहाँको आपत्ति थियो । तर आफु पनि त पुरुष दिनहुँ जसो दर खाने कार्यक्रममा गएर दर खाँदै छमछमी नाचेको उहाँले देख्नु भएन ।
मैले कसैलाई नराम्रो भन्न खोजेको होइन या कसैलाई आरोप लगाउन खोजेको पक्कै पनि होइन । यो देखासिकीको दुनियाँ हो , नक्कलै नक्कलको दुनियाँ हो । तीजमा हाल केही सिमित महिलाहरुले देखाइरहेको महङ्गो ढर्राको वास्तविकता सायद यही हो । संस्कृतिको जर्गेना गर्ने नाममा तीजलाई महङ्गो पर्व बनाइदैछ । यसैगरि तीज मनाउने हो भने यसको साँस्कृतिक पक्ष हराउनेछ र उपभोगवादी चरित्रले यसलाई खर्लप्पै निल्नेछ । देखासिकि होइन परिवर्तन गर्न सिकौ । सभ्य समाजको लाग िहामी एक एक बाट नै हो सुरुवात हुने । आधुनिक युगको भड्किलो तीज
( लेखमा कसैलाई ब्यक्तिगत या संघ संस्थालाई आक्षेप लगाउन खोजिएको होइन यदि त्यस्तो लागेमा संयोग मात्र हुनेछ ।) आयुष सम्मोहन
Sabina Thapa September 3, 2011 at 8:40 AM
आयुष जी मलाई त यो लेख पटक्कै मन परेन है । हुन त आफ्नो आफ्नो हेराई हो । तीजलाई भडिकलो भन्न मिल्दैन । यो एउटा परम्परा हो । यसलाई मात्र विशेष बनाइएको हो । यसपालीको तीजले सञ्चार माध्यममा चर्चा पाएको छ तर कि सधै नकारात्मक कुराको मात्र टिप्पणी गरिन्छ । सन्तुलित लेख लेख्नुहोला ...
Bikram Shrestha April 17, 2012 at 1:47 PM
Sabina jee aadhuniktako naam ma aphno astitwolai nai sankatma parne kam i don't like anymore
Janak September 3, 2011 at 10:11 PM
आयुष जी हेर्नुस न तीज त साच्ची नै भड्किलो भयो ..माइती को आगनी मा नाच्च्नु पर्ने तीज डिस्को मा नाच्च्न थाले ..माइती मा आमा संग घ्यु संग मुछेर खाइने दर रेस्टुरा मा बियर संग खान थाले .......आफ्नो स्तर भन्दा धेरै महंगा गहना कपडा लगायो ..आफ्नै घर र सम्बन्ध बिगार्यो ....अचम्म त के छ भने केटा हरु पनि दर पो खान थाले ..
nilam September 5, 2011 at 4:17 PM
आयुष जी मेरो विचारमा राम्रो लेख लेख्नुभएको छ । नेपालमा ९५ प्रतिशत मानिसहरु भडिकलो तिजको अवसरबाट वञ्चित छन् । सबैले मनाउने खालको तीज हुनपर्छ । तीजबाट वर्ग छुट्टिनु हुँदैन ।
Binita Bhujel September 7, 2011 at 1:45 PM
तीज आजभोली भड्किलो भएको त छ । मैले पनि यसमा सहमति जनाउछु ।
Aayush September 7, 2011 at 2:38 PM
सबै साथीहरुलाई मिठो कमेन्टको लागी धन्यवाद । तीज आफैमा नराम्रो चाड पक्कै पनि मैले भन्न खोजेको होइन । तर जुन रुपले आजभोली ३ दिनको चाडलाई डेढ महिना बढि मनाउन थालिएको छ र जुन रुपले देखाउनकै लागी मनाउन थालिएको त्यसलाई मात्र नराम्रो हो की भन्न खोजेको हो । चाड पर्वहरु एक पौराणिक कालदेखि चलिआएको परम्परा हो । कला संस्कृतीमा समयसंगै नौलोपन दिनुपर्छ तर त्यो सकरात्मक र समाजमा भिज्ने खालको हुनपर्छ । संस्कृतिको जर्गेना हाम्रो दायित्व हो भने यस्ता विकृतिको अन्त्य हाम्रो जिम्मेवारी हो त्यसैले तीजको साँस्कृतिक महत्वलाई हामी कसैले पनि विर्सनु हुँदैन ।